९ वटा बैंकको आकर्षक लाभांश, कुनको कति ? - Arthatantra.com
वि.सं.२०७८ कात्तिक ९ मंगलवार
९ वटा बैंकको आकर्षक लाभांश, कुनको कति ?
काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंक मध्ये ९ वटा बैंकले दसैं अघि नै लाभांश घोषणा गरेका छन् । बाँकी बैंकहरुले लाभांश घोषणा गरेका छैनन् ।
अहिलेसम्म लाभांश घोषणा गरेका मध्ये सबैभन्दा बढी हिमालयन बैंकको रहेको छ । बैंकले २६ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छ । जसमा बोसन २१.३८ र नगद ४.६२ प्रतिशतसहित २६ प्रतिशत लाभांश रहेको छ ।
हिमालयन बैंकपछि सानिमा बैंकको रहेको छ । सानिमा बैंकले १७.८९ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । जसमा १७ प्रतिशत बोनस र ०.८९ नगद लाभांश रहेको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सिटिजन्स बैंकले १६÷१६ प्रतिशत लाभांश दिने भएका छन् । जसमा इन्भेष्टमेन्टको बोनस ११.२४ र नगद ४.७६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै सिटिजन्स बैंकको बोनस सेयर १२.९१ र नगद ३.०९ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल बंगलादेशले पनि बोनस १२ र नगद ३.५ सहित १५.५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । माछापुच्छे« बैंकले पनि १४ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । जसमा बोसन १३.३ र नगद ०.७ प्रतिशत रहेको छ । १० प्रतिशत भन्दा कम लाभांश घोषणा गर्नेमा कुमारी बैंक मात्रै रहेको छ ।
कुमारी बैंकले ८.६७ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । जसमा बोनस ६ र नगद २.६७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरुले घोषणा गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेर बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि लगानीकर्ताले पाउनेछन् ।
वि.सं.२०७८ असोज २७ बुधवार १५:०२ मा प्रकाशित
News Views: 409
अघिल्लाे बफ तथा चिकेन छोयला कसरी बनाउने ?
पछिल्लाे गोरखाको रुईला भन्ज्याङ नाका दुई वर्षदेखि ठप्प
१ लाख बढी ऋणीले लिए १ खर्ब १८ अर्ब सहुलियत कर्जा, १ खर्ब ८७ अर्ब कर्जा बक्यौता
वि.सं.२०७८ कात्तिक ८ सोमवार १८:२०
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनरकर्जा...
दुई महिनामा संघीय सरकारले खर्चियो ८९ अर्ब ९४ करोड, प्रदेशको कति ?
वि.सं.२०७८ कात्तिक ८ सोमवार १८:१९
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा संघीय सरकारले ८९...
६.६ प्रतिशतले घट्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति
वि.सं.२०७८ कात्तिक ८ सोमवार १८:११
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष दुई महिनाको अवधिमा कुल विदेशी...
चालु खाता १ खर्ब, शोधनान्तर स्थिति ८३ अर्ब घाटामा
वि.सं.२०७८ कात्तिक ८ सोमवार १८:०६
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा चालु खाता १...
वैदेशिक रोजगारीमा जानको संख्या उल्लेख्य वृद्धि, हुण्डीको कारण रेमिट्यान्स घट्दो
वि.सं.२०७८ कात्तिक ८ सोमवार १७:५८
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ६.३...
सस्तियो नेपालीको भान्सा
वि.सं.२०७८ कात्तिक ८ सोमवार १७:५७
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनाको अवधिमा मुद्रास्फिीति घटेको...